Various Artists - Chocolate Eain (ချောကလက်အိမ်) [2016 Album] (320Kbps!) Download Link Update ! - Mg Shan Lay
Home 320 Kbps!7Album Candy High Quality မင်းမြတ် ရတနာအိမ်ဂျယ် နေထူး နေဦးကိုကို မေဆက် Various Artists - Chocolate Eain (ချောကလက်အိမ်) [2016 Album] (320Kbps!) Download Link Update !
Various Artists - Chocolate Eain (ချောကလက်အိမ်) [2016 Album] (320Kbps!) Download Link Update !
10:48:00 AM 320 Kbps!, 7, Album, Candy, High Quality, မင်းမြတ်, ရတနာအိမ်ဂျယ်, နေထူး, နေဦးကိုကို, မေဆက်,
Various Artists - Chocolate Eain (ချောကလက်အိမ်) [2016 Album] (320Kbps!)
အပစ်မဖွဲ့ - မင်းမြတ်
ပုံပြင်တစ်ပုဒ် - ရတနာအိန်ဂျယ်
အဝေးမှာအဆင်ပြေရဲ့လား - နေထူး ၊ Candy
ကလေးလေး - နေဦးကိုကို
ချစ်သူပေးတဲ့သံပတ်အသည်း - မေဆက်
ချောကလက်အိမ် - နေဦးကိုကို ၊ Candy
အပျော်တမ်းချစ်သူ - နေထူး
Feeling - Candy
ကြုံရင်ပြောပေးပါ -7, ရတနာအန်ဂျယ်
အိန်းကလေးစိတ် - မေဆက်
ယုနီဖောင်းနဲ့ကောင်မလေး - နေထူး
ချစ်ဆုတောင်း - မင်းမြတ် ၊မေဆက်
ပျော်ရွှင်ပါစ - ရတနာအိန်ဂျယ်
နယ်ရုပ် - မင်းမြတ်
နောက်ဆုံးတော့ရှုံး - Candy
ဒီလိုပါပဲ -ကလုန်း ၊ နေဦးကိုကို
Tags # 320 Kbps! #7# Album # Candy # High Quality # မင်းမြတ် # ရတနာအိမ်ဂျယ် # နေထူး # နေဦးကိုကို # မေဆက်
Labels: 320 Kbps!, 7, Album, Candy, High Quality, မင်းမြတ်, ရတနာအိမ်ဂျယ်, နေထူး, နေဦးကိုကို, မေဆက်
Thant Sin Lin January 25, 2017 at 8:29 PM
Ah....only album arts :'(